China Solid Frame Double Crank Mechanical Press (STE akateedzana) fekitori nevatengesi | Daya
Kukwirira kuomarara (deformation) yemuviri uye inotsvedza 1/8000: kushomeka kudiki uye kwenguva refu yekuchengetedza nguva.
Shandisa pneumatic wet clutch brake (yakasanganiswa mhando): kuchengetedza kwezvakatipoteredza, hapana kusvibiswa, pasi ruzha, hupenyu hurefu hwebasa.
Inotsvedza inotora ina-kona uye masere-mativi gwara nzira, iyo inogona kutakura yakakura eccentric mutoro kuve nechokwadi chenguva-refu uye yakagadzikana kugadziriswa kwekutsika kwakarurama.
Slider giraidhi njanji inotora "yakakwira-frequency kudzima" uye "njanji yekukuya nzira", iine kupfeka kudiki, kukwirira kwakaringana, kureba kwakaringana nguva yekuchengetedza, uye hupenyu hwakagadziridzwa.
Shandisa kumanikidzwa kutetepa oiri kutenderera lubrication chishandiso: simba kuchengetedza, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, ne otomatiki alarm basa, inogona kuwedzera huwandu hwekutsika nekugadzirisa vhoriyamu yemafuta.
Ruoko rwemhangura rwakagadzirwa netini-phosphorus bronze ZQSn10-1, ine simba rakapetwa ka1.5 kupfuura iro rakajairika BC6 yendarira. Iyo inotora yakanyanya kunzwisisika hydraulic zadzisa dziviriro mudziyo, iyo inogona kunyatso chengetedza hupenyu hwebasa hwechibhakera uye kufa.
Yakajairwa chiJapan SMC kumanikidza kudzora vharuvhu, lubricator, mweya firita.
Yakazara maJapan NSK mabheyari uye maJapan NOK zvisimbiso.
Yakajairwa kumisikidzwa kweGerman Siemens inobata skrini uye Nokia mota.
Pashure: Yakatwasuka Side Servo Press (STP akateedzana)
Zvadaro: Yakatwasuka Side Mechanical Press (STF akateedzana)
Yakatwasuka Side Yekumhanyisa Press Press YeMota Stator ...